मकै र आलु खेती गर्थे त्यसले खान पुग्दैन थियो । अहिलेको जस्तो गाडी चल्दैन थियो । त्यो बेला रातको १२ बजे उठेर आलु बेच्नको लागि जिल्लाको धनकुटामा लाग्ने गरेको विहिवारे हटियामा लिएर जानुपर्ने उनले सुनाए । आलुको भाउ चाराना केजीमा बेचेर के जीवन धान्थ्यो र बिस्तारै गाडीको बाटाहरू बन्न थाले । त्यस समयमा सडक बनाउने काम गर्दा पनि दुईबोरा माटो बोक्दा ५ पैसाको चिठामा पनि काम गरेको सम्झना उनले सुनाए ।
गरिबीका कारण शिक्षाबाट बञ्चित लाक्पाले क, ख, भन्दामाथि सिक्न पाइएन । फुसकै छानाको घरमा अधा जीवन कटाइसकेका उनले अफ्नो मेहनत, हिम्मत र लगनशिलतालाई आत्मासाथ गर्दै अज मनग्य अम्दानी गर्न सक्ने भए । आफू जस्तै नहोस भनी छोराछेरीलाई शिक्षित बनाउन लागि परे । २०४६ सालपछि यातायातको सुबिधा हुन थालेसँगै व्यवसायिक रुपमा तरकारी खेती गर्नेतर्फ उनी लागिपरे । सुरूमा त खसै आम्दानि राम्रो नभएपनि बहुउद्देश्यीय कृषि समूह गठन गरेर आधुनिक खेती गर्ने थाले । समूह गठनपछि छलफल एकआपसमा विचारहरू साटसाट, नयाँनयाँ योजना, विउ बिजनहरू उपलब्ध हुन थालेसँगै तरकारी खेतीले व्यवसायिक फाइदा हुन थाले ।
यसरी सुरु भयो प्रगति
हिउँदमा मटरकोसा र वर्खायाममा काउली, बन्द, मुला र आलु खेती लगाउन थाले । हिउँदमा मटरकोसाबाट ३ लाख आम्दानि लिने गरेको लाक्पाले बताए । काउली, बन्दबाट ११ देखि १२ लाख र आलु, मुला खेतीबाट ३ देखि ४ लाखसम्म आम्दानी गरिरहेको उनले सुनाए । अहिले तरकारी खेतीबाटै ८ जनाको परिवारमा पालनपोषण, पढाई खर्च पुर्याएर वार्षिक ५ लाखसम्म बचत गर्दै आएको उनले बताए । अहिले छोराहरू पनि तरकारी खेतीमै लागेका छन् भने एउटी छोरी डिग्रि र अर्की छोरिहरू पनि आफ्नो पढाई अगाडि बढार्इरहेकाछन् । उनले अहिले तिनतले घर पनि बनाइसकेका छन् । तरकारी खेतीको कृषि प्राविधिक ज्ञान नलिएपनि विभिन्न संस्थाबाट पाएको ज्ञान नै उनका लागि ठुलो सीप बने । कृषि तालिमहरू लिएर खेती गर्दा सुधार हुने उनी बताउँछन् सामुहिक रुपमा खेती गर्न नथालेको भए अहिले यस्तो सफलता नमिल्ने थियो, शेर्पाले सुनाए । उनीहरुले अहिले पालैपालो उब्जनी गरेको बताए । एकले बालि लगाउदा अर्कोले काउली, अर्काले आलु, मुला जस्ता खेती मिलाएर गर्ने गरेको बताए । यस तरिकाको खेतीले अरुअठाउँका तुलनामा माटोको उर्वरा शक्ति ह्रास हुनबाट बचाउन केही मदत गरेको बताउँछन् । सुरुसुरुमा अर्गानिक मल प्रयोग गरी ७ केजिसम्मको बन्द उत्पादन गर्न समेत सफल भएको पनि जानकारी दिए । साथै नेपाल ग्रिन संस्थाले परीक्षणका लागि दिएको बिउ उत्पादन राम्रो भएपछि काम गर्दा लागउन सेफ्टि लुगा, गम्बुटहरू दिएर सहयोग गरेकोमा खुशी लागेको बताए ।
सम्बन्धित निकायलार्इ अनुरोध
लगानी नहुने, पैसा नहुने किसानहरुका लागि सस्तो व्याजदरमा ऋणको व्यवस्था, उत्पादनमा पनि कति उत्पादन गर्ने ? माग कति छ ? त्यसको आधारमा सरकारले नै तोकि दिए किसानलाई राम्रो हुने सुझाए । कहिलेकाही बजारको मागभन्दा बढी उत्पादन हुँदा बजार भाउ भनेजस्तो नपाएको गुनासो गरे । बजारको अभाव, भन्सार कर बढी देखाएर पाउनुपर्ने मूल्य नपाउने समस्या रहेकोले यस्ता समस्याहरू समाधान गरिदिए सम्बन्धित निकायले किसानलाई धेरै सहुलियत हुने शेर्पाको भनाई छ ।
तरकारी खेतीमा समस्या देखा पर्न थालेकाछन् ।
अहिले रातो आलुमा आँखा पाक्ने समस्याका कारण तेस्को ठाउँमा सेतो आलु खेती गर्न थ लेका छन् । कोरेनेट जातका बन्दामा रोग लाग्न थालेपछि अहिले नेपाल ग्रिन जातका खेती गर्न थालेका छन् ।
कृषि खेती गरे विदेश यही
तरकारी खेतीमा मेहनत गरे विदेश जानु नपर्ने उनको भनाइ छ । अर्काको देशमा जस्तै आफ्नै देशमा १२ घण्टा काम गरे यही मनग्य कमाउने उनले बताए । कृषिमा एकैचोटि त आम्दानि नभएपनि मेहनत गर्न सके बिस्तारै राम्रो आम्दानी हुने उनको अनुभव छ । उनी विभिन्न बाधा, अड्चन समस्यासँग लडेर मात्रै सफल भएको बताए । उनले भने, अहिलेका यूवाहरू एकैचोटि सफलता खोज्जछन् । दुःख, मेहनत नगरी केहीमा पनि सफल हुदैन । भने तरकारी बालिको मल लागि अनिवार्य पशुपालन गर्न सकिए झनै राम्रो हुने बताए ।
मानवी मोक्तानका अन्य लेख तथा रचनाहरु